Redvolution Show By Ni Ni Khin Zaw - Amazing Yangon
Redvolution Show By Ni Ni Khin Zaw
Home /Event/Redvolution Show By Ni Ni Khin Zaw
REDvolution Show တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲကြီးကို တင်ဆက်မယ့် အနုပညာရှင် “နီနီခင်ဇော်” ရဲ့ ဒီပွဲကြီးစီစဉ်ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်…
❤️ “ ဒီ REDvolution Show တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲကြီးက နီနီ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားတင်ဆက်လိုက်တဲ့ Show ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သလို နီနီ့ဘဝရဲ့ပထမဦးဆုံးတစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ April (၁) ရက်နေ့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ နီနီနှင့်အတူ ဂီတကဗျာ (Orchestra), Oxygen Music Band, Secret Pieces (Dance Group) တို့နဲ့တွဲဖက်ပြီး အထူးခြားဆုံး၊ အဆန်းပြားဆုံး အဆို၊ အကတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေစိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အ၀ရအောင် အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နီနီ့ပရိသတ်တွေအားလုံး လာရောက်အားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်” ❤️ လို့ နီနီက စကားလက်ဆင့်ပါးလိုက်ပါတယ်။
?? လက်မှတ်ဈေးနှုန်းများနှင့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဆက်လက်ကြေငြာပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်။
REDvolution Show presentsagreat solo concert’s artist “Ni Ni Khin Zaw” appeared to be planningabig issue this way
This REDvolution Show big solo concert Ni yesterday presented when trying to implementabig Show Ni life’s first big solo concert.The most sophisticated, The best and let the fans satisfaction0will be performed. Ni encourage all fans visit
Ticket prices and other details will be announced if I was working.
Ardunio Day Yangon – 2017